किन भत्काउने सिंहदरबार ? - Karobar National Economic Daily
किन भत्काउने सिंहदरबार ?
query_builderFebruary 12, 2017 10:14 AM supervisor_accountउमेशप्रसाद ओझा visibility396
सहरी विकास मन्त्रालयले विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको सिंहदरबारलाई पुनर्जीवन दिन रेट्रोफिटिङ गर्न सकिन्छ कि वा पूर्ण रूपमा भत्काई पुरानै शैलीमा निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्न परामर्श सेवा नियुक्त ग-यो ।
परामर्श सेवाले रेट्रोफिटिङ गर्न नसकिने र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भनी दिएको प्रतिवेदनले बहस निम्त्याएको छ । चन्द्रशमशेरले निर्माण गरेको सिंहदरबारबाट धेरै प्रधानमन्त्रीले शासनसत्ता चलाए ।
सिंहदरबार नभत्काउने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिबाट निर्णय भएको समाचार आयो र रेट्रोफिटिङका लागि कार्यान्वयन समिति गठन ग¥यो । यो समिति कत्तिको शक्तिशाली हो ?
यसले आफ्नो विधि कसरी प्रयोग गर्छ ? अध्ययन–अनुसन्धान कसरी अघि बढाउँछ ? अनुसन्धानलाई विशेषज्ञ र प्रयोगशाला कसरी परिचालन गर्छ ? त्यो थप अध्ययनको विषय होला ।
यो पुरातात्विक संवेदनशील सम्पदालाई सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नु जरुरी थियो कि थिएन पनि बहसको विषय हुन सक्छ । तर, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन–अनुसन्धान समिति गठन गरी त्यसलाई पुरातात्विक सम्पदाको थप अध्ययन गर्न जिम्मा लगाई त्यसबाट आएको निचोड र प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयन गर्न सके पुननिर्माणको कामले हाम्रो सम्पदाको संरक्षण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनेछ ।
भूकम्पले धेरै ऐतिहासिक सम्पदामा असर हाम्रा जस्ता सम्पदा विश्वमा धेरै बनेका छन् । हाम्राभन्दा पुराना पनि छन् र नयाँ पनि होलान्, तर ती देशमा भएका सम्पदालाई संरक्षण गर्नुको सट्टा पूरै भत्काएर नामेट पार्ने कहीं–कतै प्रयास र प्रयोग देखिँदैन ।
ऐनबाट गठित पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफैंमा राजनीतिक भुमरीमा फस्यो । यसले गर्ने धेरै काम अन्योलग्रस्त र दिशाहीन हुन पुगे । प्राधिकरणले जुन दृष्टिकोण लिन सक्नुपथ्र्यो, लिन नसक्नु यसको कमजोरी हुन सक्छ । तर, योभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण नै हो ।
भूकम्पले क्षति पु-याएका पुरातात्विक संरचनामा भएका क्षतिको अध्ययन–अनुसन्धान स्वदेशी तथा विदेशी विशेषज्ञबाट भएकै हो, तर सिंहदरबारको रेट्रोफिटिङ वा भत्काउने बहस सामान्यचाहिँ पक्कै होइन ।
हाम्रा जस्ता ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदा अरू देशमा पनि छन् र ती देशमा सम्पदालाई संरक्षण गरेका उत्कृष्ट उदाहरणहरू पनि प्रशस्त छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण इटालीको पिसा टावर हो ।
यसको निर्माण सन् ११७३ अगस्टमा प्रारम्भ गरिएको थियो । निर्माणको दोस्रो चरणमा नै टावरमा समस्या देखिएको थियो । करिब २० मिटर व्यास र ६० मिटर अग्लो टावर ५ डिग्री ढल्किएको थियो ।
यसको ढल्काइका बारेमा १९११ देखि हालसम्म धेरै अध्ययन–अनुसन्धान भए । लामो समयसम्म यसको माटोको परीक्षण, जगको स्थिति र माथिको संरचनामा अध्ययन भएको थियो । विभिन्न प्रविधि प्रयोग गरेर यसलाई बचाउन विविध समाधान निकालिएका थिए ।
तर, हतारमा निर्माण गर्दा देशकै गौरवमा आँच आउन सक्ने देखेरै इटालीयन सरकारले १९९० को दशकमा इन्टरनेसनल मल्टी डिसिप्लिनरी गठन गरेको थियो । यसको अध्ययनमा संस्कृतिविद् इतिहासविद्, भूगर्भविद्, आर्किटेक्ट, सहरी योजनाकारहरू संलग्न थिए । माटो, यसको जग र संरचनाबारे अनेकौं अनुसन्धान र प्रयोगहरू भए र निचोडमा पुगेर सम्पदा बचाउने उपायहरू ल्याए ।
भत्काएर हैन, त्यसैलाई विभिन्न किसिमले जोगाउने पक्षमा निर्णय भयो । यस्तै ३ सय ५८ वर्ष पुरानो भारतको ताजमहल वातावरणीय क्षय र जगमा आएको समस्याका कारण त्यहाँको सरकार सचेत थियो ।
वायु प्रदूषण र यमुना नदीको प्रदूषण तथा पानीको सतह घटबढले पारेको जगको समस्यामा विभिन्न विधाका विशेषज्ञको संलग्नतामा अध्ययनहरू भएर केही नियन्त्रित नियमहरू लागू भएका थिए ।
हामीले पनि हाम्रा ऐतिहासिक सम्पदालाई निश्चित रूपमा निरन्तर अध्ययन–अनुसन्धान र अनुगमनमा राख्नुपर्छ अनि मात्र संरक्षण हुन्छ । देशमा भएका विज्ञहरू संलग्न गराएर अनि सम्भव भए अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसमेत मिलाई टिम बनाएर यसको भौगोलिक र संरचनाको गहिरो अध्ययन हुनु जरुरी छ ।
सामान्य रूपमा परामर्शदाता नियुक्ति गरी हलुका ढंगले अध्ययन गराउनु र निचोडमा पुग्नु यसको संवेदनशीलतालाई नबुझ्नु हो । त्यसैले यस्तो संवेदनशिल कुरामा इतिहासविद्, संस्कृतिविद्, भूगर्भशास्त्री, अर्किटेक्ट स्ट्रक्चरल विशेषज्ञको टिम र प्रविधिको उपयोग गर्नु जरुरी छ । पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गर्दा नै देशमा भवन र भूकम्पसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानको केन्द्र चाहिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपथ्र्यो ।
यसो गरेको भए हाम्रा ऐतिहासिक सम्पदा निरन्तर मूल्यांकन र निरीक्षणमा हुन्थे । समानान्तर रूपमा ऐतिहासिक सम्पदाको अध्ययन–अनुसन्धान भइरहन्थ्यो र काम पनि द्रुत गतिमा हुन्थ्यो । पुरातात्विक सम्पदाको मूल्यांकन नांगो आँखाले सामान्य माटो र यसमा प्रयोग भएका सामग्रीको समेत परीक्षण नगरी छोटो समयमा सम्भव छैन ।
विज्ञहरूको टोलीको अध्ययन गरी भत्काउने वा रेट्रोफिटिङ गर्न जुन सुझाव दिनेछन्, यसमा एउटा जिम्मेवारीपन जवाफदेहिता र पारदर्शिताको विकास हुन्छ । हामीले बचेखुचेका सम्पदालाई गहिरो अध्ययन नै नगरी भत्काउने मात्रै निर्णय गर्यौ भने हाम्रो देशमा भविष्यमा ऐतिहासिक सम्पदा एउटै रहनेछैन, किनभने पुनर्निर्माण गर्दा दुरुस्त बनाउन सकिँदैन ।
विभिन्न कालखण्ड र शासनकालमा निर्मित सम्पदाका कला–संस्कृतिका सम्मिश्रण पुरानो शैलीमा ढाल्नु सम्भव पनि छैन र कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । त्यसैले संरचनालाई सामान्य थपघट गरी पहिलेकै जस्तो दुरुस्त र तन्दुरुस्त बनाउनुबाहेक सम्पदा बचाउने अर्को विकल्प हामीसँग छैन ।
(लेखक वरिष्ठ इन्जिनियर हुन् ।)